Nchekwa ozi: Akụkọ, Terminology na Ubi nke Omume | Site na Linux
Nchedo Ozi: Akụkọ ihe mere eme, Terminology na Field of Action
Linux Post Wụnye | | ọtụtụ
Kemgbe ihe dịka iri asatọ nke narị afọ gara aga, ụmụ mmadụ esonyela ma mikpuo na usoro mgbanwe na mpaghara niile nke ndụ ọha. Ihe niile n'ihi na-aga n'ihu, na-eto ma na mmepe nke «Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)». Na «TIC» Ha sitere na mgbanwe nke gbanwere ụzọ anyị si ahụ ụzọ, ekele ma ọ bụ nyochaa oge gara aga ma ọ bụ ugbu a, na ọbụnakwa weghachite ụzọ anyị si ele ọdịnihu anyị anya dị ka ụdị.
Mgbanwe ma ọ bụ mmetụta, nke gbanwerela asụsụ anyị eji, n'ihi okike, ojiji na ewu ewu nke nnukwu okwu ọhụụ, echiche na echiche dị iche iche, rue mgbe amabeghị ma ọ bụ chee echiche. Site na akwukwo a anyi nwere olile anya ka anyi tinye aka na akuku ndi a ma muta ihe omuma banyere ugbu a «Seguridad de la Información» dị ka akụkụ dị mkpa nke ugbu a «TIC» banyere ọha mmadụ taa, ya bụ, «Sociedad de la Información» nke XXI narị afọ.
Tupu ibanye kpam kpam n’isiokwu a, ọ dị mma ịkọwapụta na echiche metụtara ya nke «Seguridad de la Información» jiri nke «Seguridad Informática», ebe ọ bụ na mgbe Nke mbu na-arutu aka na nchekwa na nchekwa nke ihe omuma ndi a «Sujeto» (Onye, Companylọ ọrụ, Institution, Agency, Society, Government), nke abụọ na-elekwasị anya na ichekwa data n'ime sistemu kọmputa dị ka nke a.
N'ihi ya, mgbe ọ na-abịa «Seguridad de la Información» nke a «Sujeto», Ọ dị mkpa na ozi dị oke mkpa maka ya na-echebe ma chebe ya n'okpuru usoro nchekwa kacha mma na omume kọmputa dị mma. Ebe obu na, kpomkwem ihe kachasi mkpa nke «Seguridad de la Información» bụ idobe data niile dị mkpa nke ahụ «Sujeto» ịgbachitere.
N'ụzọ dị otú a na anyị nwere ike ichikota na «Seguridad de la Información» dị ka mpaghara ihe ọmụma nke mejupụtara ichebe nzuzo, iguzosi ike n'ezi ihe na nnweta nke Ozi jikọtara na a «Sujeto», yana sistemụ metụtara ọgwụgwọ ya, n'ime nzukọ. E wezụga nke ahụ, «Seguridad de la Información» na-ewukwasị ntọala ya dum na ụkpụrụ ndị a:
Nkwenye: Ekwesiri izere ya na ozi a adighi ma obu ekpughere ya nye ndi mmadu, ndi mmadu ma obu usoro.
Iguzosi ike n'ezi ihe: A ghaghị ilezi anya iji dozie izi ezi na izu ezu nke ozi ahụ na usoro nhazi ya.
Enweta: Nweta na ojiji nke ozi na usoro ọgwụgwọ ya ga-emerịrị onye ọ bụla, ụlọ ọrụ ma ọ bụ usoro enyere ikike mgbe achọrọ ya.
1.1 akụkọ ihe mere eme
1.1.1 Ihe dị egwu tupu Kraịst (BC)
1.1.2 Ihe ndị dị mkpa mgbe Kraịst nwụsịrị (AD)
1.2 Echiche na Terminology metụtara ya
1.2.1 Nyochaa okporo ụzọ
1.2.2 Enweghị aha
1.2.6 Ibe mkpu
1.2.7 Akụrụngwa dị oke egwu
1.2.8 Echiche ndị ọzọ dị mkpa
1.3 Mpaghara ọrụ
1.4 Ozi ndị ọzọ metụtara ya
Site na paragraf ndị bu ụzọ, enwere ike ịkọwapụta ya n'ụzọ dị mfe «Seguridad de la Información» ọ bụchaghị pụta ụwa na nke ugbu a «Era Informática», ebe ọ bụ na ọ metụtara ihe ọmụma na ọnyà, nke ejikọtara ya na okwu nke «Humanidad, Sociedad y Civilización», ma, n'ụzọ dị iche, na «Seguridad Informática» sí.
Ya mere, anyị nwere ike depụta ihe atụ akọwapụtara nke ichebe mmadụ «Información» n'akụkọ ihe mere eme, nke a na-ejikọtara ya na nkà ma ọ bụ sayensị nke «Criptografía». Ihe atụ dịka:
Ihe dị egwu tupu Kraịst (BC)
1500: Mbadamba Mesopotamia, nke nwere usoro ezoro ezo iji mepụta seramiiki.
500-600: Akwụkwọ Hibru nke Jeremaya, jiri okwu nzuzo dị mfe site na-agbanwe mkpụrụedemede.
487: Onye ọrụ Gris SCYTALE, nke na-eji rịbọn akpịrị akpọrọ e dere ya.
50-60: Julius Caesar, Emperor nke Rome nke jiri usoro nnọchi anya dị mfe na mkpụrụedemede ya.
Ihe ndị dị mkpa mgbe Kraịst nwụsịrị (AD)
855: Ederede izizi mara amara, na Arabia (Middle East).
1412: Encyclopedia (mpịakọta 14) ebe a na-akọwa nkọwa okwu nzuzo, na usoro mgbanwe na ntụgharị.
1500: Mmalite nke cryptography na ndụ diplomatic, na Italy.
1518: Akwụkwọ mbu crypto kpọrọ "Polygraphia libri sex", nke Trithemius dere na German.
1585: Akwụkwọ "Tractie de chiffre", nke onye France Blaise de Vigenere, nke nwere Vigenere Cipher a maara nke ọma.
1795: Ngwa nzuzo nzuzo nke cylindrical, nke Thomas Jefferson, nke a maara dị ka "Jefferson's Wheel."
1854: 5 × 5 Matrix Cipher dị ka Key, si Charles Wheatstone, nke e mechara mara dị ka Playfair Cipher.
1833: Akwụkwọ "La Cryptographie militaire", nke Auguste Kerckhoff dere, nwere ụkpụrụ Kerckhoff.
1917: Mmepe nke otu teepu na-enweghị usoro, naanị usoro nchekwa nke oge ahụ.
1923: Iji igwe rotor "Enigma", nke German Arthur Scherbius chepụtara.
1929: Akwụkwọ "Cryptography in Algebraic Alphabet", nke Lester Hill, nwere Hill's Cipher.
1973: Ojiji nke "Bell-LaPadula Model", nke na-edozi iwu maka inweta ozi nkewa,
1973-76: Mgbasa na ojiji nke igodo nzuzo nzuzo algorithms ma ọ bụ igodo nzuzo.
1977: Okike nke "DES Algọridim" (Data Encryption Standard), site na IBM na 1975.
1979: Mmepe nke "RSA Algọridim", nke Ronald Rivest, Adi Shamir na Leonard Adleman dere.
Echiche na Terminology metụtara ya
Echiche na okwu metụtara «Seguridad de la Información» Ha dị ọtụtụ, ebe ọ bụ na dị ka anyị kwuru na mbụ, o nwere ihe ọzọ gbasara anyị onwe anyị karịa na «Información» dị na dijitalụ ma ọ bụ kọmputa ma ọ bụ kọmputa ma ọ bụ sistemụ, otu akụkụ nke gụnyere «Seguridad Informática». Ya mere, anyị ga-ekwupụta naanị ole na ole dị mkpa n'ụzọ a chịkọtara.
Nyochaa okporo ụzọ
Ọ gụnyere ndekọ nke oge na oge nke a «comunicación», na data ndị ọzọ metụtara ya iji chọpụta n'ụzọ zuru ezu nkwukọrịta na-asọpụta, njirimara nke ndị na-ekwurịta okwu na ihe nwere ike guzobe banyere ọnọdụ ha.
Ngwongwo ma obu njirimara ejiri mara a «Sujeto» nke gosipụtara na enweghị ike ịmata ya n'ime otu ụlọ ọrụ ndị ọzọ (isiokwu), nke a na-akpọkarị «Conjunto anónimo». Nịm nke na-abụkarị ihe niile nwere ike ịme (ma ọ bụ metụtara) ihe.
Gburugburu na-adịghị ahụ (mebere) nke akụrụngwa kọmputa jikọtara na mmekọrịta na netwọkụ. Na ọkwa ụwa, enwere ike ịsị na «Ciberespacio» Ọ bụ ohere mmekọrịta (dijitalụ na kọmputa) nke etinyere n'ime kọmputa na netwọkụ kọmputa na ụwa niile, ya bụ, na ,ntanetị. Ọ «Ciberespacio» Ekwesighi imeghari ya na ,ntanetị, ebe obu na nke mbu na-ezo aka na ihe ndi ozo di n'ime nke abuo, nke bu ihe oru aru na nke ezi uche.
Sayensị nke metụtara njikwa na usoro nkwukọrịta na ndị mmadụ na igwe, na-amụ ma na-erite uru n'akụkụ na usoro ha niile. Ya si guzobere gburugburu 1945 ma ugbu a nwere njikọ chiri anya na «Biónica» na «Robótica». Nke a na-agụnye ọmụmụ na njikwa site na ịgbakọ igwe (nnukwu kọmputa na kọmpụta) na ụdị ọrụ niile ma ọ bụ usoro njide onwe onye na nkwukọrịta nke mmadụ kere ma ọ bụ mepụta nke na-e imitateomi ndụ na usoro ya.
Ngwongwo ma ọ bụ njirimara nke na-egbochi ngosi nke ụfọdụ ozi na isiokwu ma ọ bụ usoro na-akwadoghị. Iji mee nke a, gbalịa hụ na ịbanye na «Información» naanị ndị isiokwu ahụ nwere ikike kwesịrị ekwesị.
Dọ aka na ntị nke metụtara nka ederede na asụsụ a kwadoro site na iji koodu ma ọ bụ ọgụgụ, ya bụ, ọ na-akuzi etu esi ahazi ihe «Cifrarios» (nkwupụta okwu na koodu nzuzo ma ọ bụ ederede nzuzo) na «criptoanalizar» (ọrụ ntụgharị nke na-eme ntụgharị site na nyocha «Cifrarios» nke ndi cryptographers wuru).
Akụrụngwa dị oke egwu
Ndị na-enye «servicios esenciales», nke ọrụ ya dị oke mkpa ma ghara ikwe ka ihe ngwọta ndị ọzọYa mere, nsogbu ya ma ọ bụ mbibi ya ga-enwe mmetụta dị njọ na ọrụ ndị dị mkpa.
Echiche ndị ọzọ dị mkpa
Ihe egwu: Nkwenye mmadu na-adighi nma nke, dika odi otua, di na nghota, nghota ma obu nke ezi uche, ya na nkenke nke nchekwube ma obu ohere izere ya site na nghota ya.
Nzuzo: Ntughari aka nke mmadu obula nwere banyere ihe omuma banyere onwe ya na uzo esi mara ozi a ma obu ndi ozo.
Ule: Element, means or action onye ebumnuche ya gosiputara na ihe ekwuru ya kwekọrọ na eziokwu.
Egwu: Ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ kwekọrọ na omume nwere ike ịla n'iyi ma ọ bụ mmebi na isiokwu ma ọ bụ sistemụ ekpughere, n'ihi "ntụgharị" nke iyi egwu na enweghị ike.
Mmebi iwu: Imebi iwu, ụkpụrụ ma ọ bụ omenala.
Ga: Ike ụmụ mmadụ nwere ike iji aka ha kpebie ihe a chọrọ na ihe na-achọghị.
Ala nke ihe «Seguridad de la Información» nwere njikọ chiri anya na usoro sayensị kọmputa ndị ọzọ, dịka «Seguridad Informática» na «Ciberseguridad».
Na -eleta Catherine A. Theohary:
“Maka ụfọdụ ndị na-eme ihe nkiri gọọmentị, Cybersecurity pụtara Nchekwa Ozi ma ọ bụ ịchekwa ozi dị na akụrụngwa Cyber, dịka netwọkụ nkwukọrịta ma ọ bụ usoro netwọkụ ndị a kwere. Maka ụfọdụ, Cybersecurity pụtara ichedo akụrụngwa ozi site na mwakpo anụ ahụ ma ọ bụ nke eletrọniki ”.
La «Criminalística» na «Informática Forense» bụkwa ọzụzụ metụtara oke ọrụ nke «Seguridad de la Información». Karịsịa, nke ikpeazụ, ebe ọ bụ na ọ mejupụtara nchekwa, njirimara, mmịpụta, akwụkwọ na nkọwa nke data kọmputa.
Enwere ike ịdọ aka ná ntị ndị ọzọ gụnyere gị, yabụ Ihe kachasị mma bụ ịgbasa ọgụgụ na ọzụzụ ndị a site na iji ntụaka akụkọ dị ugbu a metụtara «Seguridad de la Información» na «Seguridad Informática» na ihe omuma ndi ozo (weebụsaịtị) dika: incibe, Nchekwa (ESET) y Kaspersky.
Ozi ndị ọzọ metụtara ya
Maka ozi ndị ọzọ gaa na ntinye ndị a metụtara:
Cybersecurity, Software na GNU / Linux: Triad zuru oke
Kọmputa Nzuzo na Free Software: Imezi anyị nche
Ndụmọdụ Nchebe Kọmputa maka Onye Ọ Bụla Oge Ọ Bụla, Ebe Ọ Bụla
Free Software dị ka onye dị irè State Ọha N'uba
Free na proprietary teknụzụ si n'ọnọdụ nke Ozi Nche
Anyị na-atụ anya na akwụkwọ a, banyere «Seguridad de la Información» bara ezigbo uru maka mmadụ niile, ma ndị na-abụghị isiokwu ahụ ozugbo ma ndị metụtara isiokwu ahụ. Na ọ bụ obere ihe ọmụma bara uru ma baa uru, ọkachasị n'ogo nke echiche na okwu ndị na-abụkarị ojiji na-adịgide adịgide na agụmakwụkwọ, ọkachamara na mmekọrịta mmadụ na ibe ya metụtara «La Informática y la Computación».
Ka o sina dị, hapụ ya bara uru iji nwee ike ịkwado usoro ntọala nke na-enye onye ọ bụla ohere ihu na ụkwụ aka nri, mmalite nke ihe ọmụma na mpaghara bara uru dị otú ahụ nke ihe ọmụma dị ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Nchedo Ozi: Akụkọ ihe mere eme, Terminology na Field of Action
EMISOFT Decrypter otu ngwa ọrụ maka iweghachite faịlụ ezoro ezo site na LooCipher